Azu na-acha odo odo na osikapa - uzommeputa Como-Quiero - Como Quiero
Azu na-acha odo odo na osikapa
2 nkeji Azụ (pippin)
1 nkeji Lemon
1/8 nkeji Yabasị
1/2 ị tablespoons Mustard
1.5 ị tablespoons Odo ose (pasta)
Iji dozie osikapa: n'ime ite, gbakwunye ọkara mmanụ buru ibu ma tụba osikapa ahụ. Okporo osisi ruo mgbe ọ fọrọ obere ka ọ gaa n'ihu. Mgbe ahụ, tinye 1.5 iko mmiri site na iko osikapa ọ bụla, were nnu na-atọ ụtọ, jiri nwayọ, kpuchie ya na obere ọkụ na-enwe obere okpomọkụ na nkeji 20. Na njedebe nke oge, gbanyụọ ọkụ ma chere ihe dị ka nkeji ise.
Na mbụ, a na-eji mmanụ fọdụrụ na mmanụ fọdụrụ. Tinye ọkara nke mmanụ olive, ọkara nke ihe ọ juiceụ lemonụ lemon, na ose nụrụ ụtọ. Ka izu ike ụfọdụ mins (mins) ma tinye nnu na njedebe, nke mere na Reinta anaghị atụfu mmiri na esi nri.
Preheat the oven na 180 Celsius C. Ozugbo m ruru ọnọdụ okpomọkụ, tinye isi mmalite na azụ ma esi nri 8-10 mins.
Ka ọ dị ugbu a, na iko nke nwere mmanụ olive, sauté yabasị (mins 4). Ozugbo njikere itinye blender ya na mọstad. Usoro site na itinye aka na obere site na obere na-acha odo odo na-acha odo odo na ebe a na-eme ihe ọ juiceụ lemonụ lemon na salpament.
Na 8-10 min wepụ iyak na oven, gbakwunye ihendori ma laghachi na oven site na 5 mins gbakwunyere ihe dị ka.
* Nyefee. 260 kcal, 13% nke 2,000 kcal / p tụrụ aro otu ụbọchị
13% Abuba 2%
13% Carbohydrates 8%
13% Mineral 22%
13% Protein 72%
13% Vitamin 19%